यस्तो जो’खिममा पनि घरघरै पुगेर सं’क्रमितको सेवा गर्दै , फ्रन्टलाईनर्स प्रती नमन!:: Mero Desh
यस्तो जो’खिममा पनि घरघरै पुगेर सं’क्रमितको सेवा गर्दै , फ्रन्टलाईनर्स प्रती नमन!
Published on: १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०८:१७
बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखाकी नितु खड्काले संक्रमणको जो’खिमका बेला होम आइसोलेसनमा पुगेर बिरामीको सेवा थालेकी छन् । उनी स्टाफ नर्सकी विद्यार्थी हुन् ।धेरै संक्रमित होम आइसोलेसनमा भएकाले आवश्यक परामर्श नपाएमा जटिल समस्या आउन सक्ने भन्दै खड्का बिरामीको उपचार र मनोपरामर्शमा ख’टिएकी हुन् ।
उनले घर नजि’कका सं’क्रमित एक वृद्ध र दुई महिलाबाट नियमित उपचार र परामर्श थालेकी थिइन् । अहिले पत्र कार महासंघको आइसोलेसन कक्ष र वडा २ र ३ मा समेत पुगेर सेवा दिन थालेकी छन् । ‘होम आ’इसोलेसनमा ब’से का केही निको भए ।
केहीको सुधार भइरहेको छ,’ खड्काले भनिन्, ‘खो’की निको भएको, अक्सिजन बढेको र अन्य समस्या पनि सुधार भइरहेको छ ।’ उनीमार्फत ६५ वर्षीया वृद्धसहित अन्य तीन जनाले पनि स्वास्थ्य लाभ पाइसकेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी आएर सेवा दिएको पाएपछि बिरामीमा हौसला थपिएको उनले अनुभव सुनाइन् । ‘दैनिक घरमा पुगेर परामर्श गर्दा ३ दिनमा धेरै सुधार भएको पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘परिवारका सदस्यले पनि चासो दिएर स्याहार्न थालेका छन् ।’
संक्रमित भनेपछि परिवारका सदस्यले पनि बेवास्ता गर्ने गरेको उनले बताइन् । खड्काको नियमित परामर्शपछि वडा १ कै संक्रमित २ महिलाको पनि स्वास्थ्यमा सुधार आएको परिवारका सदस्यले जानकारी दिए ।
उनको सेवालाई वडा १ का अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सार्कीले प्रशंसा गरे ।एक वर्षसम्म ताराखोला गाउँपा’लिकाको कोभिड नर्सका रूपमा काम गरेको अनुभवलाई खड्का ले सेवामा लगाएको बताइन् ।
व्यक्तिगत खर्चमा पीपीई, मा’स्क, पन्जा र फेस सिल तथा गाउन किनेर उनले बिरामीको सेवा गरिरहेकी छन्। खड्का ले भनिन् ‘कोरोना संकटभर काम गर्नेछु ।’ खड्काकै पह लमा दुई महिनाअघि ताराखोलामा तीन दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सम्पन्न भएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको सं’क्रमण र ल’कडाउनको स’मय खड्काले सडकमा अलपत्र परेकालाई खाना खुवाउने गर्थिन् । लकडाउनका कारण भोकै परेका नगरभि’त्रका दर्जनौं कुकुरलाई पनि उनले खाना दि’एकी थिइन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेका अनुसार १ सय २५ भन्दा धेरै संक्रमित अहिले होम आइसोलेसनमा छन् । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।